အကြှနျုပျ၏ဘလော့ဂ်ကဒ်များရောက်ရှိပါပြီ! | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, စက်တင်ဘာလ 18, 2007 သောကြာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 6, 2017 Douglas Karr
ငါကွန်ဖရင့်မှာစကားပြောပြီးတာနဲ့အတော်များများကလူအတော်များများအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်တောင်းသည်။ စီးပွားရေးကဒ်ပြားလား။ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်အတွက်လား လာမယ့်လအနည်းငယ်မှာကွန်ဖရင့်သုံးခုလာမယ်ဆိုတော့ကျုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးစီးပွားရေးကဒ်ပြားအချို့ကိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ထွက်သွားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမမှတ်မိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်မည်မျှစီးပွားရေးဆုံးရှုံးမည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာပါ။
ကဒ်များဖြင့်ပြုလုပ်သည် VistaPrintဒါကကျွန်တော်သူတို့နဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်ခဲ့တာ ၅-၆ ကြိမ်ဖြစ်တယ်။ သူတို့ကပုံမှန်ဒီဇိုင်းများပါသောရိုးရှင်းသောစီးပွားရေးကတ်ပြားများကိုပေးထားသည် - သို့မဟုတ်သင်အားလုံးထွက်နိုင်သည်။ ငါသူတို့ထိပ်တွင်သူတို့စတော့ရှယ်ယာရှိခဲ့နောက်ခံပုံရိပ်အပေါ်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ငါတောက်ပရှေ့နှင့်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်နောက်ကျောတယ်။ တစ်ခုမှာ format တစ်ခုအစွန်အဖျား…သူတို့၏အွန်လိုင်းအယ်ဒီတာကို သုံး၍ အလွှာတစ်ခုကိုအခြားတစ်ခုအပေါ်၌တင်နိုင်သည်။ ငါ့ဘလော့ဂ်ကိုခေါင်းစဉ်တွင်နှင့် URL ကို, ငါသည်အဖြူအနက်ရောင်ကျော် font ကိုသုံးပါကအပြာရောင်နောက်ခံနှင့်အတူထင်ရှားတဲ့နိုင်အောင်။
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကတ်ကဒ် ၅၀၀ အတွက်ဒေါ်လာ ၅၀ လောက်ပေးတယ် ဒါကလုံးဝမဆိုးဘူးလို့မထင်ပါဘူး ငါ့ကိုသတိရတဲ့သူနဲ့သူတို့ကိုယ်သူတို့ပေးဆပ်ကြလိမ့်မယ် 🙂
တစ်ခါတုန်းကကျွန်တော့်အဖေအတွက်ကဒ်တွေထုတ်ပေးတယ်၊ ကျွန်တော်မဆက်သွယ်နိုင်တော့ပါ VistaPrint, သူတို့သည်အသစ်တစ်ခုကို set ကိုငါ့အဖေမှညဥ့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်သူတို့၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအတော်လေးသဘောကျမိပါတယ်။
ငါ့ကိုမှာဖမ်းရန်သေချာစေပါ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပါမောက္ခ B2B ညီလာခံ ချီကာဂိုမှာတက်လာမယ့်! ငါ Blogging panel ကိုအပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ ရပ်နားပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကဒ်ကိုကျွန်ုပ်သေချာပေးပါမည်။
Tags: ဘလော့ဂ်ကဒ်များအလုပ်လိပ်စာကဒ်ကတ်များdouglas karrစျေးကွက်ရှာဖွေရေး Tech Blogစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာဘလော့ဂ်စိုင်းထီးဆိုင်
18:2007 pm တွင်စက်တင်ဘာ 11, 45 မှာ
ဟိုင်း Doug မင်းရဲ့နဖူးစည်းစာတန်းနဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပြီဆိုတာငါမြင်တယ်။ ကြည့်ကောင်းပါတယ် မင်းဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲ
သင်ညီလာခံကိုလုပ်နေသည်နှင့်အမျှကြားရတာကောင်းတယ်။ ငါ 10 နှစ်အတွင်းအများပြည်သူစကားပြောကြပြီမဟုတ်ငါ Blog World အကြောင်းကိုအနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားခံစားရတယ်။ အကြံဥာဏ်များလား။
စက်တင်ဘာ 19, 2007 မှာ 6: 44 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ Adobe Illustrator နှင့် Photoshop ကို သုံး၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ headshot အပေါ် Photoshop, စာသားအပေါ် Illustrator ။ ငါနှစ် ဦး စလုံး application နှစ်ခုနှင့်အတူရှုပ်ထွေးနေပြီ, တော်တော်လေးမတ်စောက်သောသင်ယူမှုကွေး (ငါတကယ်မှာအားလုံး Photoshop ကိုမှာမကောင်းတဲ့!) ရှိပါတယ် သင်ထိုလမ်းကြောင်းကိုသွားရန်ဆုံးဖြတ်ပါကသတိပြုပါ Bittbox - ကြီးစွာသောအကြံပေးချက်များ, freebies နှင့်သင်ခန်းစာများအဲဒီမှာကျော်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါညီလာခံအရာငါ့ကိုအာရုံကြောနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားနှစ် ဦး စလုံးရရှိသွားတဲ့တစ်ခုခုပါပဲ။ ငါ site ပေါ်တွင်နေ့စဉ်စကားပြော 'လေ့ကျင့်' ကတည်းကဘလော့ဂါများပိုမိုလွယ်ကူထင်ပါတယ်။ လူသိရှင်ကြားပြောဆိုခြင်း၏သော့ချက်မှာသင်၏အကြောင်းအရာကိုသိခြင်းဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂ်သည်ဘလော့ဂါထက်မည်မျှပိုကောင်းသနည်း။ !
အဆင်ပြေစွာပြောဆိုအချိန်နှင့်အတူကြွလာ။ စကားမပြောခင်အဖြေတစ်ခုစီကိုစဉ်းစားပါ။ အဲဒါကအတော်လေးနည်းတယ်။ တစ်ခါတလေလူတိုင်းအတွက်မေးခွန်းတစ်ခုကိုငါထပ်ခါတလဲလဲပြန်ပြောပြပြီးငါ့ကိုအတူတကွတွေးတောဆင်ခြင်ဖို့အချိန်ပေးတယ်။ ငါတင်ပါးဆုံရိုးမှချက်ချင်းရိုက်ကူးရန်ကြိုးစားပါကပိုမိုရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်သွားသည်။
စက်တင်ဘာ 19, 2007 မှာ 2: 14 AM
31:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 25
မဟုတ်ပါ။ အဲဒီမှာနောက်တဖန်ကုတ်အင်္ကျီနှင့်လည်စည်း! '-p